Author: Mezishicage Voodoolar
Onesmoos Nasib Kitaaba Waaqeffannaa Luteraanii Ameerikaa keessatti akka qulqulluutti saint galmeeffameera, gaafa Waxabajjii 21 jireenyi isaas yaadatamee hin oola. Waldaan Makaana Yesuusii mana barumsa Wangeelaa isaani ikan Finfinnee jiru yaadanno Onesmoosiif jecha maqaa isaatin moggaasun isa kabajaniiru.
Hiikaan yeroo ijoollumma isaa warra garba gurguraniin bara butamee gabrumatti gurgurame. Nasib yeroo 8 ol nama adda addaatti erga ququlluu booda namni Warner Manzinger jedhamu, Masawwaatti Itti-aanaa Qoonsilaa Faransaayi kan ture naannoo Galaana DiimaattiEertiraa keessa bilisa isa baase.
Itti aansees Mishinarii Wangeelaa Iswiidin Swedish Evangelical Mission biratti Wangeela barachuuf carraa argatee iddoo Imkulluu jedhamutti wangeelas barate. Onesmoos dafee gara Oromoo Maccaa gara biyya mxcaafa deemee Wangeela barsiisee Kiristaana taasisuuf karoorfate.
Garuu Minilik II mishinariin biyya alaa kamiyyuu biyya keessa akka hin seenne waan dhorkeef karaa Sudaan Wallagga seenuuf yaali godhe.
Onesmoos achitti dhukkubaan qabamee dhukkubsatee ture. Achittii qajeelfama eeggachaa Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootti hiikuu jalqabe. Onesmoos erga umurii ijoollummaa isaatii kaasee ummata Oromoo keessa jiraachaa waan hin turiniif jechoota fi jechamoota baayyee wan sirriitti hin beekneef gargaarsa isa barbaachise.
Kanaafis maccaafa isa gargaaru Asteer Gannoo argate. Bulchaan Wallagga Kumsaa Morodaas kabajaan isa simate. Onesmoosis haala duraan hin baramneen Wangeela Afaan Oromootin barsiisa ture. Kunimmoo Qeesonni warra Ortodoksii akka isa jibban godhe.
Jaalala ummanni Oromoo isaaf qabuu fi Afaan Oromoon barsiisuun isaa warri qeesotaa Durbee Maaramii arrabsa jedhanii akka himmannaa irratti banan godhe. Waggoota itti aananiif hojiin Onesmoos mana barumsaa Naqamtee keessatti barsiisuu caalaa waan biraa hojjachuu hin dandeenye. BaraLij Iyyaasuun Onesmoosiif akka Wangeela barsiisu eeyyameef.
Warri mishinerii fi Onesmoosis ummata wangeela barsiisuu, dhukkubsataa yaaluu, fi dargaggoota mana barumsaa keessatti barnoota barsiisuu itti fufan. Achuma magaalaa Naqamtee keessati awwaallamee.